Ogaden News Agency (ONA) – Sh. Axmad Makaahiil Waxaan Idiin Soo Gudbin Doonaa Wax Aniga iyo Adigaba Laga Doonayo
Sh. Axmad Makaahiil Waxaan Idiin Soo Gudbin Doonaa Wax Aniga iyo Adigaba Laga Doonayo
Xiligii ugu horaysay ee uu soo galo Gumaysika dalka Somaliya waxay ahayd 1884 isaga oo kasoo galay dhinaca Waqooyiga Soomaliya ee manta loo yaqaan Soomali Land oo ah wadan sheektay inuu ka go’ay dalka intiisa kale laakiin aan cidina ilaa iyo hada aqoonsan. Ilaa laga soo gaadhay 1960 oo ahayd xilikii ay Soomalidu ka xoroobeen guumaysikii Ingiriiska oo Waqooyiga haystay iyo Talyaanika oo Koonfur Somaliya haystay Somalida waxay ku wada jireen gumaysi.
1904 ayay ciidamadii gumaysiku weerar ku qaadeen ciidamadii uu hogaaminayay Sayid Maxamad Cabdulle Xasan oo iyagu ahaa kuwa diidan kana soo horjeeday gumaystaha. Ciidankii isticmaarku uu isu keenay waxay kala kulmeen ciidamadii daraawiishta ee Sayidka dagaal aysan malaysanayn, waxaana ka raacay jab iyo baaba, ilaa ay muciin bideen adeegsiga diyaaradihii dagaalka. Taariikhduna waxay ahayd 1920 sida la xaqiijinayo. Diyaaradahaasi waxay duqeeyeen xaruntii daraawiishta ee Taleex.
Hadaba waxaa muhiim ah inaan ogaano in xoriyadu tahay waxayaabaha ugu qaalisan bani aadanka, hadaadan xor u ahayn maskaxdaada, diintaada, dalkaada, xoolahaada, hadaadan intaas xor u ahayn maxay tahay sharafta aad sheeganaysid.
Waxaan odhan karnaa nolosha gumaysiga waa noolal aad u hoosaysa ay tahayna in laga dagaalamo.
Ilaahay aduunkan waxuu nakeenay inaga oo xor ah waxuuna inoo abuuray inaan isaga kaligii u ahaano adoomo, laakiin bani aadan hadaan u noqon adoomo, oo dhacdo in diintaada iyo hadalkaada iyo maskaxdaadaba lagaa gumaysto, xaq waxaad uleedahay inaad ka dagaalantid ilaa aad ka helaysid xuquuqdii Ilaahay ku siiyay ee lagaa qaaday, taasina ma aha mid la isku khilaafsanyahay oo dadyawga aduunka ku nool dhamaantood saas ayay aaminsanyihiin.
Hadaba waxaan jecelnahay inaan idiin soo gudbino waxa adiga iyo aniga laga doonayo oo ah inaan ka dhiidhino gumaysiga.
Waa Walaalkiin Sheikh Axmad Makaahiil oo ku nool Makkah.